जब कर्सर नाम क्षेत्रमा छ, सेक्सन नाम देखिन्छ. जब कर्सर तालिकामा हुन्छ, तालिका कक्षको नाम प्रदर्शन हुन्छ. वस्तुको आकार देखिन्छ जब तपाईँले फ्रेमहरू वा रेखाङ्कन वस्तुहरू सम्पादन गर्नुहुन्छ.
जब कर्सर पाठको स्थानमा लगेर राखिन्छ, तपाईँ यो फाँटमा दोहोरो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ खोल्नका लागि फाँट संबादहरू. यस संबादमा, हालको कर्सर स्थानमा तपाईँको कागजातमा तपाईँ फाँट घुसार्न सक्नुहुन्छ. जब कर्सर तालिकाको स्थानमा राखिन्छ, यस फाँटमा दोहोरो क्लिक गर्नुहोस् तालिका ढाँचा संबाद बोलाउन मद्दत गर्दछ. वस्तु चयनमा भर पर्दछ, क्षेत्र सम्पादनका लागि तपाईँ संबाद बोलाउन सक्नुहुन्छ, ग्राफिक वस्तु , फ्लोटिङ फ्रेम, OLE वस्तु, सिधा क्रमाङ्कन वा स्थान र रेखाङ्कित वस्तुको आकार.
Title is: मिश्रण प्रदर्शन